Oge 13 na-abịa PUBG Mobile na Miramar Mad na ọtụtụ ndị ọzọ | Gam akporosis
Oge ọhụrụ nke PUBG Mobile ga-abata na Mee 7 na nke ahụ na-akpọrọ anyị ozugbo na mbipute 0.18.0 nke nnukwu agha royale maka ekwentị gam akporo anyị. N'etiti akwụkwọ akụkọ kachasị ọhụrụ anyị na-achọta oge ọhụụ na ihe bụ nlọghachị ma ọ bụ mmelite nke maapụ Miramar.
Ọ bụrụ na anyị amaraworị na mbụ na Erangel ga-anata n'oge ụfọdụ mmelite ọhụrụ na mma textures na imewe, ọ bụ Miramar onye ga-edozi egwuregwu Tencent ịgbakwunye ọnọdụ ọhụrụ na usoro ndozi iji mee ka ọ bụrụ ebe agha gbanwere.
1 Ihe ọhụụ "Mad Miramar" nke PUBG Mobile
2 Oge ọhụrụ na akwụkwọ ọhụụ ndị ọzọ dịka ị na-ele anya na ọbụlagodi igwe na-ere ahịa
Ihe ọhụụ "Mad Miramar" nke PUBG Mobile
Miramar nwere olu okwu Mexico a n'ozuzu ya ma odighi ebe ozo di nma inye ya ihe nzuzu. Ọganihu gburugburu adọta ndị egwuregwu karịa n’egwuregwu gị karịa map ndị ọzọ, ma si otú a nye ya isi okwu ahụ dị mkpa iji tinye ya na map ndị na-agbagharị n’egwuregwu anyị n’ìgwè.
N’ebe ugwu agbakwunyere oasis maka ịlụ ọgụ n'ofe ala dị iche iche, ebe a na-abawanye mkpọmkpọ ebe na northwest iji kpuchie ndọtị ka ukwuu ma bụrụ ohere nke anyị nwere akụkụ dị iche iche iji kpuchie onwe anyị. Ọnụ ọgụgụ ụlọ na okporo ụzọ amụbawokwa nke mere na nnukwu mbara ndị a bụ oghere ọhụrụ iji kpuchie onwe anyị ma wakpo onwe anyị megide ndị egwuregwu ndị iro.
Ọ dịla ịbawanye ụba na ọnọdụ ụfọdụ, ya mere ọ ga-adị mfe ijide akụrụngwa bara uru karị. Ọ bụ eziokwu na anyị nọ na eserese ebe ọ na-esiri anyị ike ịchọta ngwa ọgụ ka mma, dị adị n'ezie n'echiche, mana maka egwuregwu egwuregwu nke royale agha abaghị uru.
Ọzọkwa etinyere okirikiri ịgba ọsọ n'ihi na ndị oge mgbe anyị na-aga na a na onye òtù ọlụlụ na a ụgbọ ala na anyị chọrọ inwe a oké oge na-eme ụfọdụ mebiri ihe. N'ezie, ụgbọ ala ọhụrụ abanyela: Golden Mirado na nke ahụ ga-abụ ụgbọ ahụ ịchọta n'ọtụtụ sara mbara nke maapụ a jupụtara na ájá na ọzara.
Oge ọhụrụ na akwụkwọ ọhụụ ndị ọzọ dịka ị na-ele anya na ọbụlagodi igwe na-ere ahịa
Ee, ị gụrụ nke ahụ n'ụzọ ziri ezi, na ihe ị nwere ike ịhụ na vidiyo. Ugbu a anyị nwere igwe nri nke anyị nwere ike ịnweta ma si otú a gbalịa inweta nnukwu ihe ọ drinksụ drinksụ ike; n’ezie ị nwere ike ị rute 9 n ’ogbe ma ọ bụrụ na anyị nwere ihu ọma.
N'ihe banyere ngwá agha, ugbu a ị nwere ike ịgụ maka Win94 a iko iko x2,7 na ngwa ọhụrụ maka iko onyunyo nke na-enye ha ohere ịtalata. Maka ọnọdụ ájá anyị nwekwara ike ịnwe ngwa ọgụ ọhụụ: P90 SMG nwere agba nke 50.
E nwere akụkọ ndị ọzọ na-atọ ụtọ dịka ihe nlele anya na peeji nsonaazụ mgbe egwuregwu na ọbụna na-enye ihe ọmụma banyere otú nke ọma ma ọ bụ n'ụzọ dị njọ anyị mere ya. Kedu otu anyị si jiri ngwá agha ọ bụla rụọ ọrụ bụ otu n'ime data ahụ anyị nwere ike iji mee ka ngwa agha dịkwuo mma. N’ikpeazụ, anyị nwekwara mmasi ọhụrụ na mpụga isi egwuregwu, ‘‘ Cheer Park ’. A ohere nwere fun na squad na ebe i nwere ike usọrọ mmeri ma ọ bụ na-ara ara na ndị ọrụ ibe.
Ọ ga-abụ na Mee 7 mgbe oge 13 malitere, yabụ ị nwere ike ịmechaa egwuregwu ndị ahụ iji mezuo ihe niile rụzuru wee si otú a ruo ogo 100 nke oge gafere tupu nke ọhụrụ amalite. Newsfọdụ ozi anyị ga-ezitere gị n'uju mgbe PUBG Mobile bipụtara ha, n'agbanyeghị na ị nwere vidiyo nke a na-ahụ ọtụtụ n'ime ha.
Un PUBG Mobile ka nọ n'ọdịdị nakwa na ndị egwuregwu na-aga n'ihu na-achọpụta ya nke na-agabeghị egwuregwu kpụ ọkụ n'ọnụ ya. N'oge anyị na-aga n'ihu na-eche map ọhụrụ karakin anyị kwuru banyere ya ọnwa ole na ole gara aga. Ugbu a, nwee!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » PUBG Mobile weputara Mad Miramar map, oge ohuru, ugbo ohuru na otutu ndi ozo
Tecno ebua 5: New quad igwefoto ekwentị na gam akporo 10